Abenzi bemveliso yeplastiki yeplastiki abavelisi - iChina iplastiki yokwenza umatshini abathengisi kunye neFektri
Umatshini wokulaminetha ongenasinyibilikisi
Umatshini wokutywina i-PET / PVC Shrink sleeve
Ukuhlolwa kweLQ-GSJP-300A kunye noMatshini wokubuyisela umva
I-LQ-WMHZ-500II Shrink sleeve yokuthunga umatshini
I-PP, i-PE yefilimu yokuPheliswa kweLayini
LQA-080T80 PET iibhotile nkqo Umthengisi
LQA-070T80 PET iibhotile nkqo Umthengisi
B-1300 High Speed ​​uqhoqhoqho Machine
ZHMG-601950 (HL) Zenzekelayo Rotogravure Printa Press ...
i-upg-900 ithwala umenzi webhegi
Umatshini wokwenza iplastikhi uyilo olukhethekileyo lwesilting kunye nokutywina, ii-1 ii-pcs ezinkulu ze-roll roll kwaye zisikwe kwii-2 rolls ezincinci kwimveliso yesantya esiphezulu. Uyilo lwe-2 oluzimeleyo lolawulo lweekhompyuter kwaye luqhutywa yi-5.5KW servo motor. Umenzi webhegi yokuphatha ukwakulungele ukuvelisa iingxowa zeplastiki ezilahlwayo.
Vulela kuqala, emva koko uqhekeze kwaye utywine, ukutywina ubushushu kunye nokusika ubushushu, ukubetha ngenqindi ekugqibeleni. Umatshini wokwenza ibhegi yeplastiki unokwenza imigca emibini kunye nemigca emine kweli cala i-gusset T-shirt ithwale umenzi wengxowa. Umatshini wokwenza ingxowa yeplastiki unokubaleka ngaphezulu kwe-200pcs ngomzuzu. Umatshini wokwenza ingxowa yeplastiki ulungele ezona mfuno zorhwebo.
Idipozithi engama-30% ngo-T / T xa uqinisekisa i-odolo, i-70% eseleyo nge-T / T ngaphambi kokuthumela ngenqanawa.
Ukufakwa kunye noQeqesho
Ixabiso libandakanya umrhumo wofakelo, uQeqesho kunye netoliki, nangona kunjalo, iindleko ezinxulumene nokubuya njengeetikiti lomoya lokubuya phakathi kweTshayina nelizwe loMthengi, ezothutho lwasekhaya, indawo yokuhlala (ihotele eneenkwenkwezi ezi-3), kunye nemali epokothweni umntu ngamnye kwiinjineli nakwitoliki uzalwe ngumthengi. Okanye, umthengi unokufumana itoliki efanelekileyo ekuhlaleni. Ukuba ngexesha leCovid19, uya kwenza inkxaso kwi-intanethi okanye ngevidiyo ngo-whatsapp okanye ngesoftwe wechat.
Iwaranti: iinyanga ezili-12 emva komhla we-B / L.
Izixhobo ezifanelekileyo zeshishini leplastiki. Eyona nto ilunge ngakumbi kwaye kulula ukuyenza uhlengahlengiso, ukugcina imisebenzi kunye neendleko zokuxhasa abathengi bethu ukwenza ukusebenza ngakumbi.
Ububanzi boLuhlu loomama
10-35µm ngalunye umaleko
I-100-230pcs / min X2 Imigca
Misela isantya somgca
Ububanzi beFilimu obungashukumiyo
L11500 * W1700 * H2100mm usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows
Lq-300 × 4 umatshini weplastiki omncinci
Umatshini wokwenza ibhegi yeplastiki uyilo ngokukodwa lwemigca emi-4 enesantya esiphakamileyo esincinci kwimveliso yebhegi yeT-shirt. Ukuba ububanzi bengxowa ngaphezulu kwe-250mm, umatshini wokwenza ingxowa yePlastiki unokuvelisa imigca emibini ukwenza iibhegi ezinkulu.
Umatshini wokwenza ibhegi yeplastiki uneeseti ezimbini zeefotocolour zokulandela umkhondo iingxowa eziprintiweyo. Imigca emine okanye imigca emibini yokutywina ibhegi kunye nokusika kusebenza ngokulandelelana. Ukusetyenziswa komatshini iiseti ezimbini zeetoni ezi-5 zeesilinda zehydralic ukubetha iingxowa kwimilo yeT-shirt ngesiphatho.
Umatshini wokwenza iplastikhi ulungele ukuvelisa isikipa esincinci seplastiki bags kwimveliso yevolumu kunye nokusebenza okuzinzileyo.
Umzi mveliso we-upgv ulungile ekutywinweni kobushushu kunye nokusika ubushushu beplastikhi yokuvelisa umatshini.
Imigca emi-4 / Imigca emi-2
170mm - 250 mm imigca emine
250mm - 520mm kwimigca emibini
10-55 micron umaleko ngamnye
I-160-220pcs / min * 4 Imigca
Φ900mm usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows
Lq-450X2 umatshini iingxowa ezinokuboliswa ziintsholongwane
Lo matshini yimigca emibini yokutywina kobushushu kunye noyilo lokusika ubushushu, ezifanelekileyo kwisikhwama esiprintiweyo nakwimveliso yeebhegi ezingashicilelwanga. Imathiriyeli ebhegi umatshini anokuyenza yiHDPE, LDPE kunye nokurisayikilisha kwezinto kunye neefilimu ezineefayile kunye neefilimu ezinokuboliswa ziintsholongwane.LQ-450X2 luyilo ngokukodwa lwemigca emi-2 ngesantya esiphezulu semveliso yengxowa yeT-shirt. Umatshini uxhotyiswe ngeendlela ezimbini ezizimeleyo zokulawula uyilo lweekhompyuter kwaye ziqhutywa zii-4.4 kw servo motors. Umatshini unokutywina kwaye asike ifilimu yeplastiki enokuboliswa ziintsholongwane kunye nefilimu efanelekileyo.
Umatshini ulungele ukuvelisa iingxowa zeplastiki zeT-shirt ngesantya esiphezulu kunye nokusebenza okuzinzileyo iiyure ezingama-24.
30% idipozithi ngu T / T xa uqinisekisa umyalelo
I-70% eseleyo nge-T / T ngaphambi kokuhambisa ngenqanawa.
Okanye i-L / C engenakuguqulwa xa ubona
I-100-300pcs / min X 1 Umgca
upg-700 eco-friendly umatshini wokwenza ibhegi
Umatshini we-upg-700 ngumatshini wokufaka uphawu ezantsi. Umatshini unamacala amabini oonxantathu oV-fold, kwaye ifilimu inokuphindwa kube kanye okanye amaxesha amabini. Into elungileyo kukuba indawo enxantathu onxantathu inokulungiswa. Uyilo loMatshini lokutywina kunye nokugcoba kuqala, emva koko usonge kwaye uphinde ubuye umva okokugqibela. Amaxesha aphindwe kabini ama-V folds aya kuyenza ifilimu encinci kwaye itywinwe ezantsi.
Lo matshini kukhululwa umboniso bhanyabhanya kuqala, emva koko utywinwe kwaye ugcobe kuqala, emva koko u-V usonge kwaye ubuyele umva kwindawo yokugqibela. Ngezantsi ibhegi yokutywina kuluhlu olungenasiseko. Umatshini unokwenza ubukhulu beebhegi ezinobungqingili ukuhlangabezana neemfuno zentengiso.
Unwinder Film Ububanzi
Ubukhulu. Ububanzi bengxowa ebuyayo
7-35 micron umaleko ngamnye
I-160pcs / min X 1line
Umatshini wokwenza ibhegi i-UPG-300X2
Lo matshini kukutywina kobushushu kunye nokugqobhoza ukubuyela umva kwebhegi, okulungele ukuprinta kunye nokwenziwa kwengxowa engashicilelwanga. Izinto zebhegi yifilimu enokuboliswa ziintsholongwane, i-LDPE, iHDPE kunye nezinto zokurisayikilisha.
I-UPG-300X2 inokwenza iibhegi zenkunkuma kwimveliso efanelekileyo ngokutshintsha ngokuzenzekelayo imiqulu yeplastiki. Umatshini uxhobisa iiseti ezimbini zezixhobo zombane ezinamandla ombane ezinokuthi zibe nomcuphi kwindawo efanelekileyo yokuqhekeza ifilimu kunye nokwenza imiqolo kwinombolo yokukhupha.
Umatshini ulungile kwimveliso yevolumu yeengxowa ezincinci zenkunkuma ezinobubanzi obuncinci kune-250mm. Inkqubo yokwenza ibhegi yomatshini yifilimu ebuyisa umoya kuqala, emva koko itywinwe kwaye igcobe kwaye iphinde ibuye umva kwindawo yokugqibela.
Yenza umboniso bhanyabhanya ukhulule, emva koko utywine kwaye ubethelele, ubuyisele umva okokugqibela
Ububanzi Beengxowa Zengxowa
7-25µm umaleko ngamnye
upg-450X2 ibhegi kumatshini wokwenza umqulu
i-upg-450X2 is deigned for bag-on-roll bags with paper or PVC core production. Kukuzenzekelayo ukuphuka kwefilimu kunye nemisebenzi engundoqo yotshintsho kunceda abathengisi bengxowa ukuba baphucule amandla okwenza ibhegi kunye nokunciphisa amandla namandla endoda ubukhulu becala. Inkqubo yolawulo lwee-servo ezimbini zayo zenza ukuvelisa kuzinze. Yeyona khetho ilungileyo yokwenza ukutywina okusezantsi kweengxowa eziprintiweyo kunye neebhegi ezingenanto.
i-upg yenzele le modeli yengxowa kumatshini wokwenza roll yamkelwa kakhulu ngabathengi kwaye ivelise ibhegi kwiingxowa ezisongwayo ezilungele iimfuno zeemarike. Imveliso yeebhegi ezizenzekelayo ngokupheleleyo zonyusa amandla. Kuyanceda ukufumana iiodolo ezingaphezulu zokutywinwa kwaso kunye nesiphumo sokubuyela umva, siqinile kwaye silungelelaniswe.
Ukusebenza koQikelelo-xabiso: Kude kube ngama-30th EyeDwarha. 2021
Mm 300 - 600 mm
I-180-300pcs / min X 2lines
I-100-250pcs / min x 1line
LQ-XC700 / 800 Non womluki ibhegi ekwenziweni umatshini (3 ngo-1)
Imodeli emi-3 ngo-1 inokwenza ezi ngxowa zilandelayo: Ukucaciswa kweModeli yokuCaciswa kweModeli kunye nemvelaphi ikakhulu Uhlobo lweParamete r Uhlobo LQ-XC700 / 800 ububanzi beRoller 1350mm / 1400mm ukwenza isantya 20-100pcs / min Ububanzi beBhegi 200-580mm / 680mm ubude beBhegi 100-800m Ukucaciswa kwebhegi 30- 100g Ukunikezelwa kwamandla 220v, 50HZ Amandla apheleleyo 17 / 18kw Ubungakanani obukhulu be-LQ-XC700: L9000 * W2300 * H2000mm LQ-XC800: L9000 * W2400 * H2000mm Umatshini ubukhulu becala iyunithi yokubeka into enye iseti yokutsala ethe nkqo iseti enye ...
LQ-XB700 / 800 Umatshini wokwenza ibhokisi engalukanga (5 ngo-1)
Ukucaciswa kweModeli yokuCaciswa kweModeli kunye nemvelaphi yohlobo lwe-LQ-XB700 / 800 ububanzi be-1350mm / 1400mm yokwenza isantya se-20-100pcs / min ikakhulu i-Parameter ye-Bag ye-Bag ububanzi be-200-580mm / 680mm ubude be-Bag 100-800m ingcaciso ye-Bag 30-100gsm Ukunikezelwa kwamandla kwe-220v, 50HZ Amandla apheleleyo 15 / 18kw Ubungakanani obukhulu be-LQ-XB700: L12500 * W1920 * H2000mm LQ-XB800: L12500 * W2020 * H2000mm ikakhulu umatshini wokucoca iyunithi enye iseti yecala lokulinganisa elithe nkqo iseti yokuma nkqo iyunithi enye iseti engenanto m ...
LQD-600C icala-ezintathu ukutywina oluzenzekelayo Ingxowa Ukwenza Machine
Iiparamitha zobuchwephesha beNdlela: ukutywina kwamacala amathathu, ii-servos ezisixhenxe, ukondla ezine, umatshini ophambili we-servo, ukusikwa okuphindwe kabini. Ngecebo le-ultrasonic. Impahla eluhlaza: I-BOPP, i-CPP, i-PET, i-NYLON, ifilimu eyenziwe ngeplastikhi, ifilimu yabadlali abaninzi yokuqhumisa, i-aluminium emsulwa, ifilimu ene-aluminium-plating laminated film, ifilimu eplastikhi yeplastiki 3.Max. Isantya sokwenza ibhegi: ixesha le-180 / min Isantya esiqhelekileyo: ixesha elingu-120 / min (itywina elisecaleni kathathu 100-200mm) 4. Ubukhulu. Izinto zokuhamba ngesantya sokutya: ≤35 m / min 5. Ubungakanani bengxowa: Ububanzi: 80-580 mm Le ...
LQBQ Series Side Seal Ubushushu Cutting Bag Ukwenza Machine
Inkcazo yemveliso Iingxowa zecala elisecaleni lahlukile kwiingxowa zetywina ezisezantsi kunye neebhegi zetywina leenkwenkwezi, itywinwe ngobude, ngelixa ivulwa kububanzi. Ke kuyenzeka ukuba uzenzele iibhegi zokuzibambela, zitsale imitya ... Umatshini wokwenza ibhegi esecaleni unokwenza ezo zinto zipakisha ukutya njengeengxowa zokubhaka, ezo mveliso zisebenzisa iingxowa ezinjengeebhegi zekhuriya, iibhegi zokupakisha ngomhlaba njalo njalo. usebenzisa i-servo motor ukondla ifilimu, ibhanti lokuhambisa ukuhambisa iibhegi. I-EPC, i-interter, isilinda zonke ...